आजको राशिफल (२०७५ ज्येष्ठ १९ गते/२०१८ जुन ०२) | संस्कार एफ.एम.
Home राशिफल आजको राशिफल (२०७५ ज्येष्ठ १९ गते/२०१८ जुन ०२)
आजको राशिफल (२०७५ ज्येष्ठ १९ गते/२०१८ जुन ०२)
Posted By: sanskar fmon: १९ जेठ, २०७५ In: राशिफल
58,225 total views, 1 views today
आज वि.सं. २०७५ ज्येष्ठ १९ गते शनिबार तदनुसार ई. सं. २०१८ जुन ०२ तारिख,
व्यापाररव्यवसाय मध्यम रहेको छ । ज्ञान र चिन्तन उपयोगी बन्नसक्छ । बौद्धिक र चिन्तनमूलक क्रियाकलाप दिन बित्नेछ । तर साँझदेखि प्रतिकूल समय सुरु हुनसक्छ । आर्थिक समस्याले सङ्कट उत्पन्न गर्न सक्छ । खर्च बढ्न सक्छ । रिसको कारणले असर पुर्याउने सम्भावना समेत छ । आत्मबल र संयमता गुमाउनु हुँदैन ।
सुरुवातमा चन्द्रमा कमजोर रहेकाले निराशाको अनुभूति हुनेछ । मान्यजनसँग असमझदारी बढ्न सक्छ । सानातिना घरायसी काममा समय व्यतीत गर्नु पर्नेछ । पारिवारिक समस्या देखा पर्न सक्छन् । प्रतिस्पर्धामा फाइदा हुँदैन । यद्यपि वैदेशिक क्षेत्रमा सन्तोषजनक देखिन्छ । साँझपख दार्श्निक र बौद्धिक क्षेत्रमा मन जानेछ । सन्ततिपक्षका खुसीका खबर सुन्न पाइने छ ।
सन्तुष्टिको अनुभूति हुनेछ । दाजुभाइ र बन्धुवान्धवले सकेको सहयोग गर्नेछन् । कुनै कामको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । साँझमा चतुर्थ भावमा चन्द्रमाको प्रवेश हुनेछ, त्यसपछि राम्रोरनराम्रो दुबैखाले समाचार सुन्न पाउनु हुनेछ । बेलुका झिनामसिना घरायसी समस्याहरू देखापर्न सक्छन् । जीवनसाथीसित ठाकठुक पर्ने सम्भावना छ तर तुरुन्त सुलह हुनेछ ।
कलैयामा दुई दिने कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न
लिवियामा मानव तस्करहरुद्वारा १२ आप्रवासी मारिए